Wellness | Chikunguru 2021
Zvipfuwo Zvinodhaka Vs. Shamwari Nharaunda, Kambani Info Info, Nhau Wellness Dhinda Kambani, Nhau Zvinodhaka Info Kambani, Iyo Checkout Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Nhau Nhau, Wellness Nhau Checkout Hutano Dzidzo, Hutano
10 zvikonzero nei varwere vasingateedzere mirairo yachiremba
Kutevedzera mushonga kwakakosha uye kunotonyanya kukosha kana uri pamushonga unochengetedza hupenyu. Asi vamwe varwere vachiri kutora mishonga yavo. Heano zvikonzero gumi nei.
5 mibvunzo iwe yaunofanirwa kugara uchibvunza wako wemishonga
Kunyangwe iwe kana usina kana zvaunonetsekana, iwe unofanirwa kugara uchibvunza wemishonga iyi mibvunzo iri nyore paunotanga mushonga mutsva.
5 dzinoshamisa nzira kushushikana kunogona kukanganisa muviri wako
Kubva pakurasikirwa nevhudzi kusvika mukugwinha, kushushikana kunokanganisa zvinopfuura pfungwa — kunotokonzeresa kurwadziwa kwemuviri. Edza izvi nzira dzekutarisana kushushikana kusati kwakanganisa muviri wako.
Matipi mashanu ekufamba nemishonga yekunyorera
Ndeipi mutemo weTSA wemishonga? Ini ndinogona kurongedza meds mukutakura-kuenderera? Matipi edu ekubhururuka nemishonga yekunyorerwa anokugadzirira iwe kuzororo rinofara, rine hutano.
Zvakanakira mashandiro emarasha uye mashandisirwo awo zvakachengeteka
Marasha akakunakira here? Kwakachengeteka here? Dzidza maitiro ekushandisa marasha akaomeswa kugaya uye detox, uye uone kuti ndeapi mhedzisiro iwe yaunofanirwa kuziva nezvayo.
Maitiro ekudzora kumashure kune 'Quanan-tinis'
Mushure megore re COVID-19, coronavirus nedoro zvinoita kunge zvichabatana. Kana kunwa kwako kuchinetsa, heino maitiro ekudzora.
Ko apple cider vhiniga ine hutano hunobatsira here?
Takatsvagurudza zvidzidzo uye takabvunza vanachiremba nezvezvakanaka chaizvo zveaple cider vhiniga, uye takayera izvo zvinopesana nemhedzisiro yazvo - izvi ndizvo zvatakawana.
Anogona apple cider vhiniga kubatsira nehuremu?
Kunwa apple cider vhiniga yekudzikisa huremu inoshanda here? Dzidza zvinoitwa ne ACV kumuviri wako uye kuti mimwe yekurema-kurasikirwa zvinodhaka zvinogona kubatsira sei.
7 zvikonzero iwe unofanirwa kuwana wepanyama wepagore
Kusava nechokwadi kuti muviri wepagore unodiwa here? Dzidza izvo zvinosanganisirwa bvunzo dzepanyama dzegore rega, ndiani anofanirwa kuwana imwe, uye maitiro ekuchengetedza mari pakurapwa.
Kudya kwakanakisa kwemamiriro gumi nemashanu ehutano
Dzidza nezve dhayeti shanduko iwe yaunogona kuita kugadzirisa ako zviratidzo zveakajairika mamiriro ehutano seshuga, kuwedzerwa kweropa, uye IBS.
14 hangover inoporesa inoshanda
Hapana munhu anoda kupedza mazuva avo achirwara pamubhedha (achidemba zvisarudzo zvehusiku hwapfuura). Kana iwe imbibe, iwe ungangoda izvi zvehangover kurapwa izvo zvinonyatsoshanda.
Aya manomwe akanakirwa ekuyeuchidza maapplication uye maturusi
Unokanganwa kutora mishonga yako here? Aya anobatsira ekurapa chiyeuchidzo maapplication anokutumira iwe yambiro yambiro yemamedhi, ekuzadza zvakare, uye nezvimwe.
Iwo akanakisa maapplication kubatsira nehutano hwepfungwa manejimendi
Therapy maapplication haafanire kutsiva kushanya kwachiremba, asi aya epamusoro-akayerwa hutano hwepfungwa mapurogiramu anogona kupa kumwe kutsigira kune vashandisi vane kushushikana kana kushushikana.
Ndeapi vakuru vanofanirwa kuziva nezve mavitamini
Zvido zvinovaka muviri zvinoshanduka paunenge uchikura. Aya matipi pamavhitamini evakuru anogona kubatsira kuve nechokwadi kuti uri kuwana zvakakwana izvo zvinokurudzirwa kwemazera makumi mashanu, makumi matanhatu, uye makumi manomwe.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezvekupa kweropa
Mumwe munhu muU.S. anoda ropa mumasekondi maviri ega ega. Nzira chete yekupa iyo ndeyekupa ropa. Heano maitiro anoshanda, uye ndiani anobatsira.
Ndiani anogona kupa ropa-uye ndiani asingakwanise
Zvinodiwa zvekupa ropa zvinodzivirira vanopa uye vanogashira. Mimwe mishonga uye mamiriro ehutano anogona kukutadzisa kupa ropa. Tsvaga kuti ndiani anogona kupa ropa.
Nzira yekudzivirira muchengeti kupera simba
Zvinogona kuve nemubairo kubatsira mudiwa, asi zvinogona zvakare kunetesa. Usati warova mutarisiri kuneta, edza aya matipi.
Gwaro remuchengeti kuzvitarisira & kudzivirira kuneta kwevanochengeta
Vachengeti vari panjodzi yekuneta mupfungwa uye mumuviri. Dzidza zvinhu zvine njodzi, zviratidzo zvekuneta, uye mamwe mazano ekuderedza njodzi yekuneta.
Iyo 2020 CBD ongororo
Ongororo yedu yeCDD yakawana chetatu chevaAmerican vakaedza CBD, uye 45% yevashandisi veCDD vakawedzera mashandisiro avo nekuda kwekonavirus. Dzidza nezvekushandisa kweCDD muAmerica.
9 zvakajairika zvinovaka muviri kushomeka muU.S.
Vanenge gumi muzana muzana yevagari vemuU.S. Inogona kukonzera matambudziko ehutano chaiwo, kana ikasarapwa, asi inogadziriswa nemaitiro aya.
ndinogona kutora motrin uye acetaminophen pamwechete
mishonga yemusha ye erectile kudzvinyirira mune chirwere cheshuga
maitiro ekurapa hutachiona hutachiona nehydrogen peroxide
chii chakanyanya ibuprofen chaunogona kutora
sei ndisingatore chirwere chefuru